खुशीकाे खबरः भैरहवामा २५ जनाले कोरोनालाई जिते, घर फर्किन पाउँदा खुसीले नाचगान गर्दै! – PathivaraOnline
Home > समाचार > खुशीकाे खबरः भैरहवामा २५ जनाले कोरोनालाई जिते, घर फर्किन पाउँदा खुसीले नाचगान गर्दै!
खुशीकाे खबरः भैरहवामा २५ जनाले कोरोनालाई जिते, घर फर्किन पाउँदा खुसीले नाचगान गर्दै!
भैरहवाको भीम अस्पतालमा उपचाररत २५ जना कोरोना भाइरस संंक्रमित सोमबार बिहान डिस्चार्ज भएका छन् । डिस्चार्ज हुनेमा चार वर्षकी बालिकासमेत छन् ।
सप्तरीमा पनि लागु भयो आजबाट कर्फ्यू!